एउटै भवनको भुइँतलामा चारवटा बोर्ड, बोर्ड केन्द्रमा तर कार्यालय भने वडामा | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार एउटै भवनको भुइँतलामा चारवटा बोर्ड, बोर्ड केन्द्रमा तर कार्यालय भने वडामा
एउटै भवनको भुइँतलामा चारवटा बोर्ड, बोर्ड केन्द्रमा तर कार्यालय भने वडामा
२०७५, २८ चैत्र बिहीबार १७:५६
आमा समूहले उपलब्ध गराएको भवनको भुइँतला । त्यही तलाको दुईवटा कोठामा तीनवटा कार्यालय सञ्चालन । ती पनि सरकारी कार्यालयका शाखाहरु । बाहिर चारवटा बोर्ड, भित्र तीनवटा शाखा कार्यालय । कार्यालय प्रमुखदेखि लेखाको एउटै कार्यकक्ष । स्टोर शाखा पनि त्यही कोठामा । त्यो सँगै सेवाग्राही विभिन्न सेवा लिनका लागि आउने र त्यहीँबाट सेवा लिने । यसरी एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्दा कत्तिको सहज वा पीडा होला ?
यस्तै–यस्तै पीडाका बाबजुद पनि उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरमा सञ्चालित सरकारी कार्यालयका शाखाहरुलाई एकै ठाउँबाट सर्वसाधारणहरुलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अन्नपूर्ण–६ पोखरेबगरमा भवन अभावले गर्दा एकै ठाउँमा कोचिएर शाखा कार्यालयहरु सञ्चालन गरिएको हो ।
गाउँपालिकाको कार्यालयबाट नजिकै रहेको कालीगण्डकी आमा समूह भवनको तल्लो तलामा दुईवटा कोठा छन् । आमा समूहले कार्यालय सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी आफ्नो भवनको भुइँतलामा रहेका दुईवटा कोठा उपलब्ध गराएको छ । समूहले उपलब्ध गराएको भुइँतलाको एउटा कोठामा कृषि र पशु सेवा शाखाका दुईवटा शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् भने अर्को कोठामा स्वास्थ्य शाखा सञ्चालन गरिएको छ ।
तर बाहिर स्वास्थ्य, आयुर्वेद, पशु सेवा र कृषि शाखाको बोर्ड झुण्ड्याइएको छ । तीन वटामध्ये आयुर्वेदको भने अन्नपूर्ण–३, दानामा कार्यालय रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । दानामा आयुर्वेदको शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिए पनि पोखरेबगरमा बोर्ड झुण्ड्याइएको छ ।
आमा समूहले उपलब्ध गराएको तल्लो तलाको दुईवटा कोठा, त्यसमा पनि स्वास्थ्य, पशु सेवा र कृषि शाखाको कार्यालय एकै ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा प्रस्टै बुझिन्छ, सेवा प्रवाह कत्तिको सहज होला ? अनि सेवा प्रवाह गर्नेलाई पनि काम गर्न कत्तिको सजिलो हुन्छ ?
पशु सेवा शाखा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका संयोजक कृष्ण चौधरीले कार्यालय र स्टोर एकै ठाउँमा हुँदा काम गर्न समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षदेखि लेखा र स्टोर एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण काम गर्न एकदमै समस्या भएको बताउनुभयो । कार्यालय भवन निर्माण नहुँदासम्म यस्तै समस्या भैरहने उहाँको भनाइ छ ।
यता अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष केशमाया मगरले पोखरेबगरमा घर भाडामा नपाइने हुँदा एकै ठाउँमा कार्यालय राखेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले कामचलाउ गरिएको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ संरचना निर्माण गरेरै भए पनि गाउँपालिका अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरुलाई व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
पोखरेबगरको कुनापट्टी १५ रोपनी जग्गा रहेको हुँदा त्यसैमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर शाखा कार्यालयहरु स्थानान्तरण गरिने उपाध्यक्ष मगर बताउनुहुन्छ ।
स्टोरले गर्दा झनै समस्या
भुइँतलाको दुईवटा कोठामध्ये एउटा स्वास्थ्य शाखा र अर्को कृषि तथा पशु सेवा शाखाले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । कृषि र पशु सेवा शाखाले प्रयोग गर्ने कोठामा स्टोर पनि सञ्चालन गरिएको छ । स्टोरमा कृषि र पशुपन्क्षीका लागि आवश्यक विषादी तथा औषधि र उपकरणहरु राखिएको छ ।
कृषि र पशुसम्बन्धी विभिन्न विषादी एवं औषधिहरु एकै ठाउँमा राखिँदा काम गर्ने क्रममा औषधि र विषादीको दुर्गन्धले समस्या आएको कर्मचारी बताउँछन् । खासगरी पशुसम्बन्धी विषादीहरु धेरै हुने भएकाले विषादीसँगै बस्नुपर्दा धेरै गाह्रो भएको पशु शाखाका संयोजक चौधरीको भनाइ छ ।
दानामा कार्यालय, पोखरेबगरमा बोर्ड
स्वास्थ्य, कृषि र पशु सेवाको बोर्ड झुण्ड्याइएको ठाउँमा आयुर्वेद शाखाको पनि बोर्ड झुण्ड्याइएको छ । संघीयता कार्यान्वयन हुनुपूर्व नै तत्कालीन दाना गाविसमै आयुर्वेद शाखा कार्यालय रहेको हुँदा पछि जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा दानामै कार्यालय यथावत् राखिएको बताइएको छ ।
गाउँपालिका केन्द्रको हिसाबले पोखरेबगरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अफिसियल कामकाजका हिसाबले बोर्ड राखिएको आयुर्वेद शाखाका संयोजक सुर्यमणि शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिले केही समय १५ दिन दाना र १५ दिन पोखरेबगरमार्फत सेवा दिने प्रयास गरिए पनि समस्या भएपछि अहिले दानामै बसेर सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह भैरहेको छ ।
दानाका जनप्रतिनिधिहरुले दानामै आयुर्वेदको शाखा कार्यालय राख्नुपर्ने अडान लिएपछि पुरानै ठाउँमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार कार्यालय सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । पोखरेबगरबाट दाना पुग्न सवारीसाधनमार्फत आधा घण्टाको समय लाग्छ ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरी नागरिकलाई सहज सेवासुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै नेपालमा संघीयता आए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त भौतिक संरचनाहरु नहुँदा सेवा प्रवाहमै समस्या उत्पन्न भैरहेको छ ।
गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न शाखा कार्यालयहरु एकै ठाउँमा नभई छरिएर रहेको हुँदा सेवा प्रवाह गर्न तथा सेवा लिन आउने नागरिकलाई सास्ती भएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर गफ चुटे पनि त्यो अनुसार नहुँदा नागरिकको समस्या उस्तै छ ।
Previous articleनारच्याङमा कुपोषणसम्बन्धी स्थलगत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम
Next articleम्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघले पयो उत्कृष्ट सम्मान